पहिरोले सम्पर्क टुट्यो - नेपालबहस
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार सडक/यातायात
पहिरोले सम्पर्क टुट्यो
८ भदौ धादिङ । विकट उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–५ नेवेर गाउँबाट अन्य गाउँ जाने एक मात्र बाटोमा पहिरो आएर थुनिएपछि सम्पर्क विच्छेद भएको छ ।
जिल्ला सदरमुकामबाट तीन दिनको पैदलदुरीमा रहेको नेवेर गाउँ गणेश हिमालको फेदीमा रहेको तामाङ समुदायको बस्ती हो । आवतजावत नै बन्द भएकोले गाउँमा कुनै समस्या तथा विपद् पर्दा सहयोगसमेत उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
अघिल्लो लेखसुन एक हजार २०० ले बढ्यो, तोलाको ७२ हजार ५०० !
अर्को लेखवर्षा र बाढीका कारण सुडानमा ६० को मृत्यु, १०१ घाइते
आइचर ट्रक दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु, ३२ भन्दा बढी घाइते
धादिङको गल्छीमा जन्ती बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, ४० घाइते
हिमाली क्षेत्र लापामा नयाँ प्रहरी चौकी स्थापना
त्रिशूली बस दुर्घटना : ९ जनाको शव भेटियो, २१ जना अझै वेपत्ता !
आज बिहान त्रिशूलीमा बस खस्दा तीनको मृत्यु, २५ वेपत्ता !
अज्ञात समूहद्वारा एनसेल टावरमा आगजनी र विष्फोट
वडा कार्यालय पुग्नै तीन दिन हिड्नु पर्ने बाध्यता